Accueil > Gazetin'ny nosy > INTY SY NDAY : Sarotra ny miady hevitra amin’ny resaka “finoana”
INTY SY NDAY : Sarotra ny miady hevitra amin’ny resaka “finoana”
“Finoana”. Teny iray mitana anjara-toerana goavana eo amin’ny fisainan’ny olombelona io. Ny zavatra maharesy lahatra dia inoan’ny tena. Ohatra: Rehefa resy lahatra ny olona iray marary fa ravin-kazo no nahasitrana azy dia inoany iny fa nahasitrana, ary sarotra ny hanaisotra azy an’izay finoany izay.
Raha misy mpangalatra iray, avy nanao sinto-mahery, ka nandositra, ary teny ampandosirana izy no voadonan’ny fiara ka tapaka ny tongony, mba tsy maty izy, dia ny olona sasany milaza fa “tsinin’ny halatra nataony, todin’ny ratsy vitany no nahavoadonan’ny fiara azy”. Manana endrika finoana izay. Ilay mpangalatra niharan-doza indray hilaza fa “tsy nitandrina ilay mpamily ka nahadona sy nahatapaka ny tongony”. Izay no finoany fa tsy ho resy lahatra mihitsy iny olona nangalatra iny hoe “todin’ny ratsy nataony”.
Ady hevitra amin’izao fotoana ny momba ilay fotodrafitrasa eny Anatirova antsoina hoe “Kianja Masoandro”. Ao ny milaza fa “Masina io toerana io ka tsy azo anaovana zavatra mety hifanohitra amin’izany”. Manan-kasina io, hoy ny hafa, ka hiteraka loza na olana ho an’izay manosihosy ny hasin’io Anatirova io ny fikitihana zavatra eny nefa tsy mikajy na tsy manaja ny fady momba izany. Finoan’ireny olona ireny izany, fa misy koa ny olona sasany tsy hanome lanja an’izany satria tsy nandalo tao amin’ny fisainany akory izany “hasina” sy “fady” izany. Vao mainka nihombo ny fifandroritana tamin’ny hoe “ny Mpanjaka Ranavalona voalohany dia nivavaka tamin’ny sampy, fa rehefa tonga ny Mpanjaka Ranavalona faharoa ka noresen’ny vahiny mpitondra fivavahana kristiana teto lahatra izy fa ny finoana kristiana no fanavotana, dia nodorany ny sampy ary nataony fivavaham-panjakana mihitsy ny fivavahana kristiana. Finoana koa izay.
Ny akon’izany, ohatra, nisy ny fanenjehana ny mpino kristiana teto tamin’ny fotoana sasany, ary porofo mitohoka amin’ny tenda ny nandefonana an-dRasalama Martiora. Tetsy ankilany, rehefa nodorana ny Sampy teny an-dRova, dia nivalaketraka avokoa ny mpanara-dia sy nivavaka tamin’ny sampy satria zary potika ny sampy nanankinany ny fiainany.
Amin’izao fotoana, ny olona mino ny maha-zava-dehibe ny “hasina” nananan’ny toerana toa an’Anatirova eto Antananarivo sy any amin’ny toerana hafa, dia mijoro ho saro-piaro amin’izany. Tsy omen-tsiny izy fa izay no mibahana ao amin’ny finoany. Dia tonga hatramin’ny hoe “tsy haharitra eo amin’ny toeram-pahefana itantanany ny fitondrana ny firenena ny mpitondra ankehitriny izay mikitikitika ka tsy manaja ny hasin’Anatirova”. Ny sasany milaza fa “hidiran-doza izay tsy manaja ny fady amin’ireny toerana manana ny hasina ireny.
Etsy andaniny, misy amin’ny kristiana tena vontom-pinoana koa no milaza, na tsy miditra lalina amin’ity ady hevitra momba ny fotodrafitrasa eny Anatirova ity aza izy ireny, milaza izy, “rehefa miankina sy tsy miroaroa saina ianao fa miankina sy matoky an’i Jesosy dia tsy hisy hahavoa anao, ary raha ankininao amin’i Jesosy ny zavatra ataonao, dia ho tanteraka izany”.
Ny sokajin’olona sasany indray, sady tsy miankina amin’ny lanjan’izany hasina sy fady izany izy no tsy resy lahatra amin’izany lanjan’ny finoana an’i Kristy izany fa mihevitra hoe “ny rafi-pandaminana ny fiaraha-monina sy izay fampivoarana ny fiaraha-monina mba hahitan’ny mpiara-belona ny fivelaram-piainany dia miankina betsaka amin’ny fifampitondrana sy fifampifehezan’ny mpiara-belona, izay adikan’ny mpahay famakafakana sasany hoe “rapport sociaux de production”, dia izay no finoany ka tsy ho resy lahatra amin’ny zavatra hafa ankoatra izay izy. Mety ho loharanon’ny fampahantrana io rafi-pandaminana ara-piaraha-monina voafaritra farany io raha toa ka misy fifandanjan-kery (rapport de forces) mitanila ao, izay miseho amin’ny endri-pifanararaotana sy hafetsifetsena na fanamparam-pahefana.
Sarotra noho izany rehetra izany ny miady hevitra amin’izany tranga miteraka finoana sy faharesen-dahatra isan-karazany izany. Ny tsy azo hamaivanina dia ny fifandanjan-kery eo anivon’ny fiaraha-monina amin’ny fotoana isehoan’ny tranga iray no mibaiko ny zavatra rehetra.